Gịnị bụ liturgy na gịnị kpatara o ji dị mkpa na theka?
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 2, 2020 Septemba 2, 2020
Liturgy bụ okwu na-enwekarị ọgbaghara ma ọ bụ ọgba aghara n'etiti Ndị Kraịst. Nye ọtụtụ ndị, ọ na-ebu nkọwa na-adịghị mma, na-ebute ncheta ochie nke ụka ụka na-achọghị mgbanwe nke nwere iwu na ọrụ siri ike. Nye ndị ọzọ, ọ bụ okwu a na-anụkarị, ma ọ nweghị ihe ọ pụtara.
Liturgy bụ okwu dị mkpa na echiche niile ndị Kraịst niile kwesịrị ịghọta, n’isiokwu a anyị ga-enyocha ihe liturgy bụ n’ezie na ihe kpatara o ji dịkwa mkpa na ụka.
Kedu ihe "liturgy" pụtara?
Okwu liturgy bụ usoro nke ihe omume nke ọrụ okpukpe. Ka ndị a kọwara dị ka "liturgical" nwere ọrụ ofufe siri ike ma sie ike soro na-agbaso usoro mgbanwe nke ihe / mmemme. Ọtụtụ mgbe a ga-enye ndị parish akwụkwọ na-egosi usoro ọrụ iji mee ka onye ọ bụla mara ihe na-eme na ihe na-abịa.
Ọ bụrụ n ’ị maara okwu liturgy, nke a bụ ihe nwere ike ịgbata gị n’obi ma ị nụ okwu a. Ikekwe ị gara chọọchị dị otú ahụ mgbe ị bụ nwatakịrị, ikekwe chọọchị Katọlik, chọọchị Ọtọdọks, ma ọ bụ ụdị ụfọdụ nke chọọchị Protestant na-adịghị agbanwe agbanwe. Ọtụtụ, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile, na-ahụ ọtụtụ ihe nhụjuanya ụka a na-akpọ nkụ, na-abụghị onye, ​​na-agwụ ike.
Ọ bụrụ na ọtụtụ anaghị amasị ụdị ofufe a, gịnị kpatara na ọ ka dị? Kedu uru nke lụrụ ụka siri ike na-efe ofufe?
Maka ụfọdụ ndị ụka, ihe kpatara eji arụ ọrụ dị elu nke ụka sitere n'okike nke ọdịnala. A na-ebu ụzọ rụọ ọrụ ụka dịka ha na-emebu, karịa ịnwa ịmegharị ọrụ ofufe na oge mgbanwe. Ebumnuche bụ iji hụ na ịdị na-agbanwe agbanwe na ahụmịhe ụka. Echiche bụ: kedu ihe kpatara eji agbanwe ọrụ ụka ugbu a mgbe usoro ịhazi ọrụ ga-arụ ọrụ kemgbe ọtụtụ narị afọ?
Echiche a ekwesịghị ịbụ ihe ọchị. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi nkụ na-agwụ ike nye ndị bịara ọhụrụ, nye ndị nọrọla ọtụtụ afọ, ọ bụ ọdịnala a nwalere oge. Usoro iwu siri ike na-enye mmadụ ohere iji uche mee nkwadebe ma tinye aka na ahụmịhe nke mmụọ a hụrụ n'anya ma tụkwasị obi. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị kwere ekwe na-ahụ ụdị dị iche iche dịka nnu nke ofufe, ndị ọzọ na-ele nkwekọ na ikwesị ntụkwasị obi anya dị ka ọnụ ụzọ nke nnukwu ahụmahụ na Jizọs Kraịst.
Kedu ihe ofufe liturgy pụtara na ụka Katọlik?
Na liturgy bụ isi na isi maka ofufe na Churchka Katọlik. Okpukpe Katọlik hiwere isi n'ọdịnala, ụzọ a ga-esi jigide ọdịnala ahụ bụ site n'ịhụ na ịkwanyere usoro iwu dị egwu ma na-agbanwe agbanwe ugwu.
Ọ bụrụ na ị gaa na Katọlik uka, ị ga-ahụ na ọ bụrụ na ị bịaghachi ọzọ n'ime ọnwa isii, ọrụ ofufe ga-adị nnọọ ka n'usoro na ikuku. Nke a bụ ezi ebumnuche ma bụrụ ihe a na-ahụkarị n'okpukpe niile karịa ka mmadụ nwere ike iche na mbụ.
Ndi ọ bụ naanị ndị Katọlik na-ekpe okpukpe ndị ụka?
Ihe na-ezighi ezi banyere liturgy bụ na ụka Katọlik bụ naanị ụka nwere liturgy. Nke a abụghị eziokwu. Churchka ọ bụla nwere akwụkwọ nsọ. Ọ bụ ezie na ụka gị nwere ike ọ gaghị adị ka ụlọ ụka Katọlik siri ike, ọrụ ụka gị nwere ike ịgbaso usoro ihe omume a tụkwasịrị obi. Ọ bụrụ n ’ịga chọọchị ụka, ọrụ ụka gị nwere ike ịgbaso usoro dịka: ife ofufe; kẹle; ekpere / ọgụgụ; okwuchukwu; fee ofufe; ngọzi.
O yikarịrị ka usoro ihe omume a ọ ga-abụ na a gaghị atụgharị ya. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ nweghị nkụpụta, na-agbanwe agbanwe, ọtụtụ ụka dị iche iche na usoro ọrụ ha niile. Ihe a bu liturgy uka gi ma obu ihe di nma.
Okpukpe dị mkpa na ụka n'ihi na usoro dị mkpa na ofufe. Ọ bụ ezie na enweghị mmetọ nwere ike inye aka n'ịmepụta ahụmịhe ime mmụọ, enweghị ntụkwasị obi zuru oke nwere ike ọ gaghị abụ. Ọ bụrụ na ị bụ Onye Kraịst nke na-agachi ụka anya, ị nwere ike ibu amụma nke usoro ọgbakọ ụka gị ga-enwe oke izi ezi. Mgbe ị na-aga ụka n'ụtụtụ Sọnde, ị nwere ike iji uche mee ka uche na obi gị kwadebe maka ihe ị na-achọ inweta. I nwere ike ịtụ anya otu Mmụọ Nsọ ga-esi gafee n’ọgbakọ gị. Nke a bụ uru bara uru nke liturgy.
Ofufe liturji ọ bụ nke Akwụkwọ Nsọ ka ọ bụ nke akaọrụ?
Azịza dị mkpirikpi nye ajụjụ gara aga bụ ee. Liturgy bụ nke Akwụkwọ Nsọ na nke mmadụ mebere. O doro anya na usoro nke Akwụkwọ Nsọ maka usoro ọmụmụ siri ike ma na-agbanwe agbanwe mgbe ọ bịara ofufe nzukọ. Kaosinadị, ọ nweghị akwụkwọ iwu pụrụ iche nke Akwụkwọ nsọ ọhụụ ga-egosi ofufe ụka nke ụka Kraist.
N’ezie, usoro nke Akwụkwọ Nsọ maka liturgy ahụghị n’Agba Ọhụrụ ma ọlị, kama ọ bụ n’akwụkwọ mmalite nke Akwụkwọ Nsọ. Levitikọs (ị maara, akwụkwọ ahụ onye ọ bụla gwara gị ka ịwụrụ) nwere ntuziaka doro anya doro anya banyere otu ndị Chineke ga-esi fee ya ofufe, ọkachasị site n'usoro nke usoro ịchụ aja.
Iwu ndị metụtara usoro ịchụ aja akọwapụtara nke ọma na ihe kpatara na ọbụghị n'ihi na Chineke bụ onye ọchịchị aka ike na-achịkwa onye chọrọ ka anyị wụli elu elu iji mee ihe na-atọ ya ụtọ. Kama nke ahụ, Chineke bụ Chineke dị nsọ ma bụrụkwa Ọkaakaa bụ onye tozuru oke inweta ofufe na otuto nke ogo kasịnụ, iwu Ya maka ofufe na-egosikwa ịdị nsọ Ya na eziomume Ya.
Levitikọs 20: 26 na-enye ọnọdụ a maka nzube nke iwu ndị a: "You ga-abụrụ m nsọ n'ihi na mụ onwe m, Jehova, dị nsọ, ewepụwo m gị n'etiti ndị mba ọzọ ka ị bụrụ nke m." Zọ anyị si efe ofufe kwesịrị igosipụta ịdị nsọ nke Chineke, na iji usoro ọmụmụ dị mma na-enye aka inye Chineke otuto n'ụzọ kachasị mma site na ofufe anyị.
Ọ bụ ezie na Levitikọs nyere ndị Juu ọrụ siri ike maka ofufe, enweghị iwu ọ bụla a kapịrị ọnụ maka ofufe n'Agba Ọhụrụ. Ya mere, ndi Kraist nwere nnwere onwe igbanwe uzo di iche iche nke ofufe dika nkwekorita nke akwukwo, odi nma na nkwekorita omenala. N’uzo di otua, liturgy bu nke Akwukwo nso, nihi na mbu nke Chineke guzobere n’onwe ya n’agba ochie, o bukwa nke aka mmadu, n’ihi na odighi ede akwukwo ndi liturgy nke anyi maara ta.
Ihe liturgy nke akwukwo nso nwere ike diri ka ndi kwere ekwe n’otu n’otu
Ọ bụ ezie na liturgy dị mkpa maka nzukọ ofufe dịka ụka Katọlik ma ọ bụ ụka Sọnde, liturgy ahụ bakwara uru na usoro ndị otu Kraịst na-eme taa. Ọtụtụ Ndị Kraịst na-agbasi mbọ ike n'ihe omume ofufe ha kwa ụbọchị, otu ihe kpatara ya bụ na akụkụ "usoro" ahụ na-ahapụ ọtụtụ ihe ịchọrọ. A na enwekarị obere amụrụ ma ọ bụ ihe kpatara ya na nnukwu oge na oge ofufe, nke a nwere ike ibute njem okwukwe siri ike.
Yabụ kedu ka esi etinye akwụkwọ arụsị ka oge ofufe anyị mma?
Zọ kachasị mfe iji liturgy maka oge nke gị na Chineke bụ itinye usoro dị mfe. Nke a nwere ike sie ike ma ọ bụ nwee obi iru ala dabere na njirimara na mmasị gị. Agbanyeghị, itinye usoro dị mfe iji soro Chineke nọrịa nwere ike inyere gị aka ịkwado usoro ị na-eme, yana inye gị ntuziaka mgbe ị nwere ike 'ịnọ n'ọnọdụ' oge iji soro Chineke nọrọ.
Akwụkwọ nke gị nwere ike ịdị mfe dịka ekpere> ịgụ akụkụ Akwụkwọ Nsọ> ekpere. O nwekwara ike ịgụnye ọzụzụ ime mmụọ dịka ibu ọnụ, ntụgharị uche, lectio divina, akwụkwọ akụkọ, na ofufe egwu.
Mma nke liturgy nke onwe bụ na enwere ike ịhazigharị gị na njirimara na mmekọrịta gị na Chineke Ebumnuche nke usoro a bụ ịkwado mmekọrịta chiri anya nke Chineke, ọ bụghị ịkwalite akụrụngwa ọgụgụ ọgụgụ akọrọ na omume ọgụgụ nke Akwụkwọ Nsọ. N'otu ụzọ ahụ chọọchị dị iche iche kwesịrị isi gosipụta ịdị nsọ na ọbụbụeze Chineke, oge nke anyị na Chineke kwesịrị igosipụta ịhụnanya, mmekọrịta chiri anya, na nraranye nke Chineke.
Okwu ahụ bụ "liturgy" na-ezutekarị mmeghachi omume na-adịghị mma n'etiti ndị Kraịst taa, nke a bụ ihe ihere. Ebe ụka "hyper-liturgical" abụghị ezigbo ihe ngwọta nye ọtụtụ ndị Kraịst, ọ dị mkpa ịmata ụwa niile nke liturgy n'etiti ụka Kraist, ọbụlagodi na ụfọdụ liturgies abụghị etiti.
Ọbụghị naanị na liturgy nwere ike ịkwalite ofufe n'ime nsọpụrụ Chukwu n'etiti ọgbakọ nke ndị kwere ekwe, ọ nwekwara ike bụrụ onye na-agbanwe egwuregwu maka ndị kwere ekwe n'otu n'otu na usoro ofufe ha. Akwụkwọ nsọ bụ ụzọ esi amata Chukwu na fee ya nke ọma, ọ dịkwa mkpa maka ahụike na ume ofka taa.
Nke gara aga Post Gara aga post:Ozioma nke taa dị ka Septemba 2, 2020 na ndụmọdụ nke Pope Francis
Next Post → Post ozo:Ndụmọdụ taa bụ 2 Septemba 2020 site na Venerable Madeleine Delbrêl